एउटा सहमतीको खुशी र निम्त्याएको आशा – पुरु's कर्नर
Home » Old Blog » एउटा सहमतीको खुशी र निम्त्याएको आशा
एउटा सहमतीको खुशी र निम्त्याएको आशा
By Purushottam Adhikari 11, 02, 2011
“यो बीबीसी नेपाली सेवा हो, अब सुन्नुस प्रमुख समाचार, नेपालका प्रमुख राजनैतीक दलहरुबिच शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता दिने विषयमा महत्वपूर्ण सहमती ।”
हुर्रे, भन्दै तीन हात माथि उफ्रीए यो समाचार सुन्ने बित्तिकै । म मात्रै होईन सायद हरेक नेपाली जो यो क्षणको लागि अनबरत रुपमा प्रतिक्षा गरी रहेका थिए करिव पाच बर्ष पहिलेदेखि, उनिहरुको लागि खुशीको सिमा थिएन यो क्षण्, लौ अब चै देशले निकास पाउनेभयो, हाम्रो देश पनि विकस र प्रगतिको बाटोतिर उन्मुख हुनेभयो भनेर । क्षणभरमै यो खबर यत्रतत्र सर्बत्र फैलियो, रेडियो टीभी का तरङग देखी फेसबुकका स्ट्याटस र ट्विटरका ट्वीट्स सम्म । एकछिन त मैले पनि ठूलो युद्ध जितेको भान गरे, मन खुशीले पुलकीत भयो, अब गरी खानेले काम गरी खान पाउनेभए जस्तो लाग्यो ।
तर एकैछिन गम्भिर भएर सोचे, अह यसरी संसारनै जितेजसरी बेतुकको र क्षणिक खुशी हुनुको कुनै अर्थ छैन । छ महिनामा पुरा गर्छु भनेर कसम खाएका दलहरुले बल्ल पाँच बर्षपछी लौ भनेर एउटा काजगमा सही गर्दैमा उनिहरुको कुन पुरु षा र्थको यस्तो धेरै कदर गर्नु ? एउटा कागजमा त सही गरे, न त्यो उनिहरुको सही गर्ने अनि कार्यन्योयन नगर्ने पुर्ख्यौली बानीको एउटा उपज मात्र पो हो की! अर्का थरी असामन्य सहमती भन्दै कुर्लिरहेका छन । अहिलेनै यसरी लंका नै मारेको जसरी खुशी भएर उफ्रीनु बेकाम छ, बरु अब यो सहमती को कार्यन्योयन र यथासिघ्र संविधान निर्माणको लागि जनदवावको पो आवश्यक हो की । वास्तवमै नेपाली जनता विश वोकै सबैभन्दा सोझा जनताहरुमा प्रथम स्थानमा पर्छन होला, तुलना गर्ने हो भने, सहनशिलता र धैर्यताको खानी । तर यो सहनशिलता र धैर्यतालाई कमजोरी ठानेर अघी बढेमा त्यसको परिणाम कस्तो हुनेछ भन्ने इतिहासका पानाहरुले देखाइसकेका छन । राणा शाशन, पञ्चायत, राजतन्त्र जसरी बडारीए त्यसरीनै अब अरु कोही पनि ज्वारभाटाका लप्काहरुमा बिलय नहोलान भन्न सकिन्न ।
तर नेपाली जनताका एकमात्र आशाका केन्द्र रहेक प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्ट्राइ को बिशेश अग्रसरतामा भएको यस सहमतीलाई सकरात्मक रुपमा भने स्विकार्नै पर्छ हामीले! अब बिगतका कमी कमजोरी स्विकार्दै आगामी दीनहरुमा मुलुकलाई अग्रगामी निकास र देश बिकासको पथ मा लगी सुन्दर शान्त नेपाल बनाउन यो सहमती कोसेढुङ्गा सावित होस्, सबैले जिम्मेवारी बहन गरेर अघी बढी देशले शान्ती र संविधान पाओस । नेपालको फलोस फुलोस यही शुभकामना र मेरो आशा पनि ।